Dargaggoonni Libyaa Garee Mormitoota Deggeran Leenjii Waraanaa Fudhataa Jiran
Walakkeessa guyyaa irra shaakalla waraanaatu Jarutha Bangazi irraa km 20 fagaatee bakka jirutti geggeessama. Kanneen mootummaa Libya kan Moammar Gadafii morman attamiin xaayyaaratti akka dhukaasan shaakalaa jiran.
Qawween dullachi takkaa erga dhukaasee booda ciniinee hafe. Rakkoo momitoonni qaban hedduu keessaa tokko taankilee fi xayyaarawwaan waraanaa Colonel Gadafii dura dhaabbachuuf meeshaa waraanaa gurugddaa dhabuu isaaniit i.
Kanneen fedha ofiitiin shaakala kanatti bobb’an hedduun jiinsii fi tishirtii ofii uffatanii argamu.
Mootummaa Gadaafii dura dhaabachuuf meeshaa waraanaa hidhachuu qabna. Jarri Meeshaa waraanaa fi taanilee qabu. Nu caalaa daran hidhatanii jiru.
Kolonel gadaafiin wayita injifataman inni barnoota isaa dhiise itti deebi’a, ammaaf garuu matinuun keenya loltoota waraanaaf meeshaa barbaachisoo taanee dha jedhan.
Qawween dullachi takkaa erga dhukaasee booda ciniinee hafe. Rakkoo momitoonni qaban hedduu keessaa tokko taankilee fi xayyaarawwaan waraanaa Colonel Gadafii dura dhaabbachuuf meeshaa waraanaa gurugddaa dhabuu isaanii ti.
Kanneen fedha ofiitiin shaakala kanatti bobb’an hedduun jiinsii fi tishirtii ofii uffatanii argamu.Mootummaa Gadaafii dura dhaabachuuf meeshaa waraanaa hidhachuu qabna. Jarri Meeshaa waraanaa fi taanilee qabu. Nu caalaa daran hidhatanii jiru.